मिङमार स. शेर्पा
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । क्षयरोगबाट पीडित सोलुखुम्बुका ग्याल्जेन शेर्पाले आफन्त भेटेका छन् । उनका दाई पासाङ शेर्पा भाई भेट्न र जिम्मा लिन वीर अस्पताल आएका हुन ।
त्यस्तै, रत्नपार्कमा सडकमा खाना खाने गरेका लाक्पा शेर्पाको पिसिआर चेक भएको छ । नेपाल शेर्पा संघले उनको पिसिआर चेक गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । उनी निषेधाज्ञा जारी भएदेखि नै रत्नपार्कमा नै खाना खाएर जिविका चलाउँदै आएका थिए ।
नेपाल शेर्पा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको नेतृत्वमा रत्न पार्क र वीर अस्पताल पुगेका टोलीले विरामी र पीडितहरुको उद्धार गरेको हो । क्षयरोगबाट ग्रसित ग्याल्जेन शेर्पाको उपचारका लागि संघले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी अस्पतालमा भर्ना गरेको सामाजिक विभाग प्रमुख साङ्गे लामा शेर्पाले शेर्पाखबरलाई जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सोलुखुम्बु केरुङकै लाक्पा शेर्पाको पिसिआर चेक गरेर नतिजा आएपछि रोजगारीको समेत ग्यारेन्टी गरेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए । संघको अगुवाईमा पीडितहरुको उद्धारका लागि पछिल्लो समय तदारुकता देखाएका छन् । राहत, उपचार र उद्धार सम्बन्धि नीति बनाएर संघले युद्धस्तरमा कार्य गरिरहेको छ । ‘कुनैपनि शेर्पा भोकै बस्न नपरोस्, उपचार नपाएर मर्न नपाओस्’ भन्नेमा आफूहरु गम्भिर भएको महासचिव लाक्पा शेर्पाले बताए ।
कोरोना महामारीका कारण धेरै शेर्पाहरु पीडित रहेको तथ्य औल्याउँदै नेपाल शेर्पा संघले पीडितहरुलाई उद्धार गर्दै उनीहरुको जीवनयापनका लागि सहजिकरण गर्ने नीति अघि सारेका छन् ।
संघले भनेका छन् ‘कोरोना र अन्य कारणले पीडामा रहेको शेर्पाहरुले नेपाल शेर्पा संघमा सिधै सम्पर्क गर्न सकिन्छ । हामीले आपतकालिन राहत कोष स्थापना गरेका छौं । सम्पूर्ण शेर्पाको जीवन रक्षाका लागि हामी क्रियाशिल छौं ।’
वीर अस्पतालमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, प्रथम उपाध्यक्ष साङ्गे शेर्पा, सचिव लाक्पा जी शेर्पा, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष आङ काजी शेर्पा, राज्य व्यवस्था विभागका सचिव मिङमार सार्की शेर्पा र सामाजिक सेवा विभागका सचिव राग्बा शेर्पा लगायत पुगेका थिए ।
मिङमार स. शेर्पाका अन्य लेख तथा रचनाहरु
ग्याल्जेन शेर्पा वीर अस्पतालमा अलपत्र !
शेर्पा नृत्य प्रतियोगितामा २२८ प्रतिस्पर्धी
शेर्पा किदुग अमेरिकाले कोरोना विरुद्ध ‘शान्ति पूजा !’